I-Honor Magic 2 ifumana uMlingo we-UI 2.0 nge-Android Pie | I-Androidsis
Xa i-Honor yabhengeza ngokusesikweni kwi Umlingo 2, ikwenzile oko nge-EMUI 9.0, umaleko wokwenza ngokwezifiso u-Huawei. Ngaphandle koko, ifowuni ifumana uhlaziyo kwi-Android Pie phantsi kweMagic UI 2.0, Inguqulelo yamvanje yengubo yokutyikitya.
Uhlaziyo, oluncinci kakhulu, yi-214 MB kuphela ngobukhulu, kwaye ayizisi kuphela ujongano lomsebenzisi omtsha, kodwa iza nesikhuselo sangoNovemba. Inguqu ithi iMicrosoft UI ibeka ugxininiso kwi-AI. Ukuba uyakhumbula, i-Honor Magic 2 ine-intelligence eyenziweyo ebizwa ngokuba yi-Yo-Yo eneempawu ezinje ngokuguqulelwa kwelizwi kunye ne-Google Duplex-like feature.
Umlingo UI 2.0 ukwazisa indibaniselwano entsha yemibala, ii icon kunye neefontiOko kuthetha ukuba ifowuni yakho iya kujongeka yahlukile emva kokufaka uhlaziyo. Ngaphandle kwaleyo kunye neempawu eziziswa nguYoyo, abafana kwiXDA-Abaphuhlisi bathi iMagic UI 2.0 ayihlukanga kangako kune-EMUI 9.
Ukuba ungumnini webhongo we-Honor Magic 2, ungaqhubeka kwaye ujonge ukuba uhlaziyo lufikile, ugqithile Useto o Cwangcisa. Ukuba ayifumaneki, kuya kufuneka ulinde, njengoko uhlaziyo luhlala lukhutshwa kwiibhetshi.
I-Honor Magic 2 ine uyilo olutyibilikayo olukuvumela ukuba ufumane isikrini esingaphantsi kwe-bezel. Iikhamera zangaphambili kunye nezivamvo zibekwe kwisiqingatha sesibini sefowuni kwaye ziyabonakala xa usilayida phantsi ifowuni.
Iphaneli enayo yi-6.39-intshi ye-AMOLED kwesikrini esine-19.5: 9 factor ratio. Ngaphakathi, ungumnikazi weKirin 980 nge-6 okanye i-8 GB ye-RAM kunye ne-128 okanye i-256 GB yendawo yokugcina eyandisiweyo. Kukho iikhamera ezintathu ngasemva kwefowuni: I-16 MP + 16 MP + 24 MP kunye nezinye iikhamera ezintathu ngaphambili: 16 MP + 2 MP + 2 MP.
UMlingo 2 une-a Isibonisi esingaphantsi kweminwe, Inkxaso yokuvula ubuso kwe-3D, iBluetooth 5.0 kunye ne-USB Type-C port. Ukongeza, inebhetri ye-3,500 mAh kwaye ixhasa ukutshaja okukhawulezayo kwe-40 W.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Honor Magic 2 ihlaziyiwe kwaye ithathe indawo ye-EMUI 9.0 nguMlingo UI 2.0 nge-Android Pie